“अहिले नै भारतबाट नेपाली नल्याऔं, को,रोना भित्रिनसक्छ ” : ओली ….यो निर्णय लाई तपाई क भन्नु हुन्छ??? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/“अहिले नै भारतबाट नेपाली नल्याऔं, को,रोना भित्रिनसक्छ ” : ओली ….यो निर्णय लाई तपाई क भन्नु हुन्छ???
२१ वैशाख, काठमाडौं । भारतमा लक-डाउन लम्बिँदै गर्दा अ,लपत्र परेका नेपालीहरुलाई के गर्ने भ`न्ने विषयमा आइतबार मन्त्रि`परिषद् बैठकमा छलफल भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रि`परिषद् बैठकमा मन्त्री`हरुले भारतमा अलपत्र नेपालीहरुलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
चण्डी`गढमा मात्रै ११ सय नेपाली अलपत्र परेका छन् र उनीहरु नेपाल आउन चाहन्छन् । अन्यत्र पनि अ,लपत्र परेका नेपालीहरुको सं`ख्या बढ्दो छ भन्ने विषयमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा रिपोर्टिङ गरे ।
जवाफमा प्रधान`मन्त्री के..पी. शर्मा ओलीले अहिले त्यहाँको अवस्था ग,म्भीर नभएको भन्दै लो,कप्रिय कुरा गरेर नहुने बताए । १२ सय मान्छे ल्याउने नि,र्णय गर्दा २ हजार आउने भन्दै उनले भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउनु स्वा`स्थ्यको हिसा`बले जो,खिमपूर्ण हुने बताए ।
सि`मानामा रहेका मानिसलाई ल्याउन खोज्दा दिल्लीमा रहेका मानिसहरु पनि हिँड्न थाल्ने भएकाले अहिले नै भारतमा रहेका नेपालीको उ,द्धार सम्भव नभएको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो ।
भारतबाट को,रोना भित्रिन नदिन सीमानामा अझै कडाइ गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।अब भारतमा स,मस्यामा परेका नेपालीहरुलाई त्यहीँ रहेको नेपाली दूताबासले हेर्ने गरी परराष्ट्र मार्फत निर्देशन दिइने क्या`बिनेटको नि`श्कर्ष रहेको स्रोतले बतायो ।